विश्वव्यापी हृदय रोग मानिसहरूको ठूलो संख्या पीडित। तथ्याङ्क अनुसार, विकृति यस प्रकार मृत्यु को पहिलो कारण हो।
इजरायल मा कार्डियोलजी को प्राथमिकता क्षेत्रको छ किन हो चिकित्सा। Israeli यो मुद्दा धेरै ध्यान डाक्टर, नियमित नयाँ निदान र उपचार विधि विकास, साथै नयाँ चिकित्सा तयारी मा लगे। इस्राएलका हरेक वर्ष निदान, उपचार र हृदय रोग को रोकथाम मा नवीनतम वैज्ञानिक अग्रिम को अभ्यास मा शुरू छन्।
को निदान गर्न एक दृश्य संग को हृदय प्रणाली को रोगहरु को को Israeli विशेषज्ञहरु केही आधुनिक तरिका लागू:
विभिन्न मापदण्डहरु रगत र मूत्र परीक्षण;
छाती एक्स-रे (शायद);
हृदयको अल्ट्रासाउंड (echocardioscopy) - हृदय रोग को निदान को मुख्य विधि। यो तपाईं व्यक्तिगत रगत र हृदयको क्षेत्रमा अन्वेषण गर्न अनुमति दिन्छ।
चुम्बकीय अनुनाद - रगत प्रवाह ischemic रोग, मुटुको आक्रमण र अन्य रोग प्रक्रियाहरू मा हृदय क्षति र रक्त नली संकेत मापन गर्न सम्भव बनाउँछ;
angiocardiography चुम्बकीय अनुनाद विपरीत एजेन्ट प्रयोग गरेर। यो निदान विधि प्रयोग गर्न थाले धेरै लामो पहिले छैन।
radioisotopic विधि - यो प्रक्रिया को प्रभाव radioisotope सामाग्री रोगी को शरीर मा अग्रिम शुरू छ जो को संग्रह छ। अध्ययन बाहिरु निलय समारोह र आफ्नो पर्खाल को गतिशीलता मा हृदय को मांसपेशी को दोष, साथै कमजोरीहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ यस प्रकारको;
पोजीट्रान उत्सर्जन tomography (पीईटी) - निर्धारित छन् जो सञ्चालन angioplasty र कोरोनरी धमनी बाइपास सर्जरी विरामीहरु गर्न प्रबन्ध;
प्रक्रिया केन्द्रीय नसाहरु र धमनिहरु को नालशलाका छ - तपाईं दबाइ र गहन हेरविचार एकाइ भर बिरामीको अवस्था प्रविष्ट गर्न अनुमति दिन्छ;
हृदय नालशलाका प्रक्रिया र मुख्य जहाजहरु भास्कुलर र हृदयको सही निदान गर्न बाहिर छ। सर्जरी अघि सामान्यतया निर्धारित। तथापि, centuriae को उपचार मा लागू गरियो: समयमा हृदयजन्य आघात, बाइपास सर्जरी पछि पटक-पटक एनजाइना, भास्कुलर angioplasty को प्रयोजन को लागि, आदि त्यहाँ अवस्थामा जहाँ दायाँ को निदान नालशलाका उपचार जान्छ छन् ;.
10 भर्चुअल नालशलाका हृदयको एक उच्च गतिको एक्स-रे स्क्यानिङ र तीन-आयामी छवि छ जो एक नवीन विधि, मानिन्छ।
अनुभवी cardiologists इजरायल, साथै परीक्षा को नवीन विधिहरू को व्यावसायिकता रोग अङ्कित गर्न र सही उपचार चयन गर्न अनुमति दिन्छ।
प्रमाणित cardiologists समूह काम गर्ने Israeli हृदयरोग विभागको आफ्नो व्यक्तिगत कौशल र उच्चतम स्तर मा हृदय रोग को उपचार प्रदान भन्दा समग्र व्यावसायिक अनुभव संयोजन। आधुनिक निदान र उपचार प्रविधिहरू प्रयोग संग परिधीय संवहनी रोग को उपचार - इस्राएलमा हृदयरोग, आक्रामक गैर-आक्रामक र हस्तक्षेप हृदयरोग प्रयोग भन्दा जोडती, तर अन्य। मानिसहरूलाई जीवनको गुणस्तर सुधार भन्दा इस्राएलका हृदयरोग विभागको हृदय रोग को उपचार मा एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान गर्दछ।
यो Israeli विशेषज्ञहरु अंग प्रत्यारोपण रोगी को निष्ठा संरक्षण र आफ्नो हराएका कार्यक्षमता फिर्ता नगर्न हरेक प्रयास गर्दै भनी टिप्पण लायक छ। यो जो सफाई जहाजहरु, stenting, विशेष प्रत्यारोपण (कृत्रिम pacemakers, कृत्रिम वाल्व, आदि) को स्थापना समावेश विशेष अंग सञ्चालनका मतलब छ, द्वारा हासिल छ। उपचार पछि यो रिकभरी धन्यवाद अक्सर धेरै समय लिन्छ र एक पूर्व रोगी सामान्य जीवन शैली फर्कन सक्नुहुन्छ।
Israeli cardiologists अन्तर्राष्ट्रिय र स्थानीय वैज्ञानिक अनुसन्धान मा सक्रिय भाग लिन। साथै, त्यहाँ फरक क्षेत्रमा नैदानिक परीक्षा सञ्चालन मा माहिर एक विभाग छ। उदाहरणका लागि, आधुनिक लागूऔषधको एक pharmacological प्रभाव (तीव्र र क्रोनिक राज्य), aortocoronary बाइपास सर्जरी आदि नवीन उपकरण प्रयोग
बलौटे खाडी (Baikal) - मा रूसी साइबेरियन रिवेरा
मास्को मा सुन्तला लाइन मेट्रो
कसरी यो उपयोगी र रोचक बनाउन एक बच्चा6महिना विकास गर्न?
कार सोभियत संघ: मोडेल र फोटो
ट्याब्लेटको निर्देश "Septefril"। आवेदन र analogues